नेवारी पहिरनमा किर्तिपुरमा तरकारी बेच्दै गरेको अवस्थामा भटिए- शिशिर भण्डारी ! के युटुब छोडेका हुन ? (भिडियो हेर्नुस) « Etajakhabar
नेवारी पहिरनमा किर्तिपुरमा तरकारी बेच्दै गरेको अवस्थामा भटिए- शिशिर भण्डारी ! के युटुब छोडेका हुन ? (भिडियो हेर्नुस)
प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७६, मंगलवार १६:१४